Kuzoqhubeka ukufakwa kuka gesi eVutha | News24
Kuzoqhubeka ukufakwa kuka gesi eVutha
Isithombe: SithunyelweIMeya yaseMandeni, uMnuz Siphesihle Zulu umemezele ukuthi luzoqhubeka uhlelo lokufakwa kuka gesi endaweni yaseVutha.
IMEYA yaseMandeni, uMnuz Siphesihle Zulu umemezele ngoLwesibili oledlule, ngomhla ka-8 kuLwezi (November), ukuthi ukufakwa kukagesi ezindlini zaseVuthu kuzophothulwa maduzane.
UMnuz Zulu ubekhuluma emhlanganweni obubanjelwe enkundleni yezemidlalo yaseNkomidli, endaweni yaseNdulinde.
Uthe: “Namhlanje sihlangane lapha ukuzo kwethula usonkontileka okungu A1 Electrical kanye noMnuz Percy Mthembu owe PSMT Engineers abazoqhubeka nomsebenzi wokufakela amakhaya aseVutha ugesi. Ngenkathi kufakwa ugesi esigabeni sokuqala kwasala izindlu ezingu-352, yiwona msebenzi ozoqedelwa manje kanti silindele ukuthi uzothatha izinyanga ezintathu,” kusho iMeya.
Unxuse abahlali bakulendawo ukuba bengaqhubeki nokusebenzisa ugesi oxhunywe ngoku ngekho emthethweni njengoba sebezoxhunyelwe ugesi oqhamuka kwa-Eskom.
IMeya ithe: “Njengo masipala sisebenzisana ngokubambisana no-Eskom kanye noMnyango we-Energy and Minerals ukuqinisekisa ukuthi imiphakathi yakithi ifakelwa ugesi,” kusho yena.
Uqhube wathi ngokohlelo luka masipala lokuthuthukisa izinqalasizinda sekwakhiwe izindlu ezingu-1000 endaweni yaseVutha.
Uthe: “Kubalikeli ukuthi sikusho ukuthi umasipala uzoqhubeka nesigaba sesibili sokwakhiwa kwezindlu ukuze labo abangazitholanga izindlu bezozithola nabo,” kusho uMnuz Zulu.
Uthe njenga manje umgwaqo u-D883 ufakelwa itiyela kanti umasipala ubambisane noMnyango wezokuThutha usuhlele ukuqala kokwakhiwa kwebuloho khona eVutha.
UMnuz Zulu uthe: “Njengo masipala siphinde sibe nezinhlelo ezihlelelwe ukuthi zilekelele imiphakathi yethu ukuthi ikwazi ukuxosha ikati eziko njengo hlelo i-CWP lapho khona siqasha amalungu omphakathi ukuba ezosebenzela ezikhungwini zikahulumeni ezahlukahlukene,” kusho yena.
Esephetha, uMnuz Zulu unxuse abakhokhintela baseMandeni ukuba beqikelele ukuthi intela bayikhokha ngesikhathi njengoba leyo mali idlala indima enkulu ekutheni umasipala ukwazi ukuhlinzeka izinqalasizinda.